Voasedra, Nandray anjara tamin'ireto fandrafetana varavarana shaft manaitra ireto ny mpamorona - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Blog / Sahirana, mpanaingo no nanome ireto famolavolana vavahady manaitra ireto
2021 / 06 / 08 FisokajianaBlog Interior design 9562 0
Ny taona 2020 dia taona tsy manam-paharoa nanovana an'izao tontolo izao sy ny fomba fiainany ny olona. Nandritra ny fotoana lava dia tsy maintsy nanohy nipetraka sy niasa an-trano sy an-tserasera izahay. Soa ihany fa ny fiovana toy izany dia tsy nitondra ny famoronan'ireo mpanao mari-trano, mpamorona, mpanao trano ary na dia ny tompon-trano manerantany aza. Mbola mandray anjara betsaka amin'ny tetikasa famolavolana maritrano sy anatiny maro izy ireo.
Ao amin'ny tetik'asa famolavolana maritrano sy anatiny miavaka, ny varavarana dia efa nihoatra ny fidirana tsotra ho lasa singa iray amin'ny famolavolana. Ary ny varavaran'ny pivot dia fifangaroan'ny hatsarana sy fiasa tonga lafatra. Ity misy topy fijery folo amin'ireo famolavolana vavahady pivot tsara indrindra tamin'ny taon-dasa raha ny fahitan'ny mpamatsy fitaovana varavarana pivot, manomboka amin'ny hafahafa mamelombelona ka miharo tanteraka amin'ny teknolojia vaovao.
Ity varavarana pivot ity dia mamorona lalantsara misy fijery amin'ny farany
Na eo amin'ny toerana fahafolo aza, ity varavarana pivot vera vita amin'ny hazo terebinta ôka ity dia hevitra mahagaga. Mamorona toerana mafana izy io. Avy eo amin'ny faran'ny lalantsara dia hita tsimoramora ny fandaminana ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny fijery tsara avy amin'ny varavarankely hatramin'ny voalohany. Ny varavarana rehetra ao an-trano dia noforonina tamin'ny fomba minimalista ary tonga saina amin'ny fitaovana voajanahary sy voajanahary. Ny mpamorona dia maniry fatratra vera, miaraka amin'ireo mpiambina fitaratra eo amin'ny tohatra fiakarana, gorodona fitaratra eo an-dalantsara ary vera lehibe eo am-baravaran'ny pivot. Izy io dia manana toetra tsy manam-paharoa, nefa tafiditra tanteraka ao amin'ny endriny ankapobeny.
Mandrindra ny tetikasa: Danemark.
Famolavolana anatiny: m2plus.
Famokarana varavarana Axis: Vahle;
Fitaovana varavarana valiha: FritsJurgens, Netherlands, M Shaft varavarana fakan-tsary
Varavarana hazo nafenina tao amin'ny sisiny iray
Ny toerana fahasivy koa dia vavahady hazo hazo. Ny akora dia veneer-n'ny walnut. Ireo takelaka iray ihany dia ampiasaina matetika manerana ny trano. Ireo varavarana roa ireo dia tsy vitan'ny varavarana fidirana fotsiny. Rehefa nakatona izy ireo dia lasa ampahany amin'ny sisin-dàlana vita metatra mirefy maromaro metatra. Saika ny fanaka rehetra ao amin'ity trano ity dia namboarina manokana, ka nahatonga fomba iray tsy manam-paharoa izay hafa tanteraka amin'ny vokatra vita amin'ny fivoriambe.
Tetikasan'ny tetikasa: Slovenia.
Famolavolana anatiny sy famolavolana varavarana hazo: marasovic arhitekti.
Fitaovana varavarana Axis: FritsJurgens System M Fitaovana varavarana Axis, Netherlands
Ity varavarana hazo goavam-be "lehibe" ity dia toa tsy maizina mihitsy
Ny kely kokoa dia ny fomba tsara indrindra hanazavana ny varavarana fidirana izay nifidy fahavalo. Ny rafitra mainty, varavarana mainty ary tantanana mainty no mamorona ny vavahady malalaka mankany amin'ny trano. Ny endriny toa tsotra dia asa be tokoa. Ny vatan'ny varavarana dia vita amin'ny vy mainty mafy sy mangatsiaka. Mifanipaka mahaliana amin'ny fitaratra manodidina ny varavarana sy ny valindrihana hazo mafana eo an-tampony izany.
Tetikasan'ny tetikasa: Etazonia.
Fanamboarana varavarana Axis: DoorWood Doors.
Fitaovana varavarana Axis: FritsJurgens Systems M Axis Door Hardware, Netherlands
Ireo tetik'asa telo ireo dia nampiasa ny fitaovana fitaratra varavarana FritsJurgens System M avy any Netherlands. Raha ampitahaina amin'ny Systems 1 sy 3, ny System M dia manisy fampiasa vaovao: fanaraha-maso tanteraka ny fahalemen'ny fihodinan'ny varavarana hazo. Misokatra maivana toy ny volom-borona ny varavarana ary mihodina tsara be. Malemy toa ny bitsika ny fanidiana. Izy io dia azo atao noho ny teknolojia patantin'ny System M, rafitra fanalefahana roa, izay mifamatotra tsy misy tohiny.
Tsy misy singa mandrafitra
Ny rafitra M dia azo ampidirina tanteraka ao an-tampon'ny sy eo ambanin'ny varavarana: tsy misy singa mandrafitra amin'ny gorodona sy ny valindrihana.
Fahazoana be indrindra: hatramin'ny 500 KG
Izy io dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony duplex avo lenta miaraka amin'ny fiarovana ny harafesina tsara sy ny firaka alimina anodized. Ny rafitra M dia afaka manohana varavarana mihoa-pampana, mihoatra ny 500 kg.
Ny hatevin'ny varavarana farany ambany: 40 MM
Ny System M tenany dia 32 mm ihany ny hateviny.
Ny rafitra M dia vita amin'ny fitaovana tsara indrindra ary tsy misy fikojakojana amin'ny fepetra fametrahana tsara
Mety amin'ny fanavaozana vaovao na fanovana ampahany
Ny visy System M gorodona dia mila voromailala ao anaty gorodona ihany amin'ny 8mm, izay midika fa ny System M dia azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana ambanin'ny tany.
Mora ny manitsy
Ny famolavolana vaovao dia mamela ny fahazoana mitsivalana isam-baravarana na dia aorian'ny fametrahana aza ny varavarana. Ny haingam-pandeha dia azo ovaina.
Mety amin'ny karazana varavarana rehetra
Mety amin'ny varavarana hazo lehibe, mavesatra kokoa, lava avo kokoa, varavarana vy, varavarana fitaratra vita amin'ny vera ary varavarana mitaingina mavesatra. Mety amin'ny varavarana anatiny sy ivelany, ary koa ho an'ny tontolo iainana sy ara-barotra.
Mamiratra sy be rivotra, avo be ity loft ity noho ny fisarahana ny habakabaka
Ity varavarana pivot vita amin'ny vera vita amin'ny vy ity, izay nalahatray fahafito, dia nanampy ny mpamorona hanana ny habaky ny tampon-trano. Ny fizara vita amin'ny vera vita amin'ny vy dia manana endrika ambony ary endrika mainty tena tery izay lehibe nefa tsy lehibe. Eo afovoan'ny fizarazarana dia misy varavarana pivot roa izay azo sokafana sy akatona mora foana, ary azo tazonina amin'ny toerana misokatra 90 ° ihany koa. Ireo habaka roa mipetraka ao anatiny sy any ivelany dia mifandray sy voajanahary avy hatrany.
Mandrindra ny tetikasa: Austria.
Famokarana varavarana Axis: Axis Pivot Türen.
Ny safidy akora mahazatra amin'ny varavarana fidirana dia ny fanambarana momba ny famolavolana ny endrika
Rehefa nahita ny safidin'ireo fitaovana ho an'ity varavarana fidirana ity izahay dia tsy afa-niala fa tsy niteny hoe “Mahafinaritra izany! . Ny varavarana dia vita amin'ny hazo vita amin'ny tanany vita amin'ny varahina izay tsy hihena rehefa mandeha ny fotoana. Ny fampiasana ny FritsJurgens System M hazo varavarana lamba avy any Netherlands dia nanome fahalalahana hamoronana endrika lehibe indrindra ho an'ny mpamorona. Tsy fameperana intsony ny lanja sy ny fitaovana ary ny habe. Ny mpamorona dia afaka mamela ny fisainany hivezivezy ary hamela ny varavarana fidirana ho lasa ampahany amin'ny fanahin'ny endrika.
Mandrindra ny tetikasa: Aostralia.
Famokarana varavarana Axis: Coppice Joinery.
Fitaovana varavarana valiha: FritsJurgens FritsJurgens System M fitaovana fitaratra varavarana avy any Pays-Bas
Asa tanana, fampisehoana asa tanana miavaka hafa
Nahazo sitraka betsaka tamin'ny media sosialy ity varavarana fidirana ity. Tsy mahavariana fotsiny izany noho ny habeny sy ny endrik'ilay varavarana, fa koa satria ny endrik'ilay mpamolavola dia tsy latsaka ny fanantenana nandritry ny fizotry ny famokarana. Ny tahony varahina lava dia mifangaro tanteraka amin'ny endriny tsotra nefa tsara tarehy eo am-baravaran'ny hazo.
Famolavolana anatiny: NBBJ.
Fanamboarana varavarana axis: Singa maritrano.
Fitaovana varavarana valiha: FritsJurgens Systems M Shaft varavarana lamba, Netherlands
Volavola holandey, vita tany Netherlands, mozika mirindra amin'ny alimo sy varahina
Ny varavarana hazo vita amin'ny vera vita amin'ny vy dia efa be mpampiasa,. Saingy nosafidinay ho varavarana fahefatra ity varavarana vatan-kazo namboarina holandey noforonin'i holandy ity satria dia fihodinana vaovao amin'ny mahazatra. Amin'ity tranga famolavolana anatiny ity, ny endriny vy mainty dia mety ho somary nanjombona, ka ny mpamorona dia niloko loko mafana kokoa. Amin'ny alàlan'ny fandokoana ny tampon'ny varahina amin'ny varahina ary avy eo anaovina manadio azy tsara, ity varavarana hazo fitaratra ity dia mifangaro mirindra kokoa amin'ireo haingon-trano manodidina.
Mandrindra ny tetikasa: Netherlands.
Famolavolana anatiny: Herman Peters Interiordesign.
Famokarana varavarana Axis: Laska Metaal.
Ao amin'ny fananganana ilay mpandresy ny loka tsara indrindra amin'ny loka holandey 2020
Ny varavarana vatan-kazo dia mamorona toerana mangina
Ity varavarana hazo goavam-be, mangina, «plush» ity dia miorina ao amin'ny tranobe Forum, mpandresy tamin'ny loka Dutch Best Building 2020. Ny varavarana vatan-kazo dia miafina ao anaty rindrina ary rakotra fahatsapana manga manga ho an'ny fifohana ny feo. Ny fahatsapana ny hatevin'ny 1cm dia reincarnation vita amin'ny tavoahangy PET nariana. Naneho tamim-panesoana ilay mpamorona ihany koa ny teny hoe "zonao ny mangina" amin'ny tsapa.
Famolavolana anatiny: DeMunnikdeJongSteinhauser sy Prast & Hooft.
Famokarana varavarana hazo: Harryvan Interieurbouw.
Fitaovana varavarana valiha: FritsJurgens, Netherlands.
Ny herin'ny fahatsorana, ny hatsaran'ny fahatsorana
Notsidihinay faharoa ity vavahady hazo ity noho io antony io: ny fahatsorana - maneho izany ny tokony ho endrik'ilay vavahady hazo tsara tarehy. Izy io dia manana endriny aluminium tsotra misy zorony boribory. Ny fitaovan'ny vavahady hazo dia tsy mipetaka eo afovoan'ny varavarana roa no tapaka. Vao mainka misongadina io haben'ny malala-tanana eo am-baravarana io. Hita eo amin'ny faran'ny lalantsara izao ny fahitana an-tendrombohitra tokana an-tampon'i Soisa.
Tetikasan'ny tetikasa: Soisa.
Famokarana varavarana Axis: air-lux.
Fitaovana varavarana Axis: FritsJurgens FritsJurgens System, Netherlands 1 Fitaovana varavarana Axis
Trano tokana amoron-dranomasina, fandikana tsy manam-paharoa ny maritrano maoderina
Ny fidirana amin'ity trano amoron-dranomasina ao amin'ny McAnally Drive ity dia lava sy manaitra tokoa ary mahafinaritra ny mifidy ny toerana voalohany amin'ireo volavola miavaka maro. Ny varavarana fidirana efa ho enina metatra ny haavony dia natao hanakoako ilay lava be vato manodidina ny villa. Alohan'ny hidiranao ao amin'ny villa aza dia efa azonao ny mahita ny ranomasina ao ambadiky ny villa amin'ny alàlan'ny varavarana hazo fidirana. Ity trano maoderina ity dia toy ny diamondra mamirapiratra
- Mafy sy tsy azo ravana, fa miaraka amin'ny antsipiriany mahavariana.
Mpandrindra ny tetikasa: Aostralia; Famolavolana anatiny: Gavin Maddock
Fanamboarana varavarana vodin-trano: asa-tanana vita amin'ny vy any Aostralia.
Fitaovana varavarana valiha: FritsJurgens Systems M Shaft Door Hardware, Netherlands
Ao amin'ny 2020, FritsJurgens any Netherlands dia manolotra ny andiany M + mahery kokoa.
Ilay System M + vaovao, misy fifehezana varavarana hazo mahery vaika kokoa
Ny FritsJurgens System M + dia mitondra ny fahombiazan'ny rafitry ny varavaram-baravarana haavo amin'ny ambaratonga vaovao, mifototra amin'ny System M. Rafitra fantsom-baravarana lozisialy azo ovaina. Ny asan'ny Latch Control dia manome antoka fa ny varavarana vatan-kazo dia azohidiana tanteraka amin'ny toerana aotra ary izay fihodinan'ny varavarana ho an'ny 500 kg dia azo fehezina tsara. Ny herin'ity fanaraha-maso ity dia azo ahitsy arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Na ny System M na ny System M + farany, ny teknolojia fananan'i FritsJurgens dia manome antony ara-teknika matanjaka ho an'ny fifehezana ny vokatra azo avy amin'ny famaky.
Previous :: Mivoatra hazavana sy aloka amin'ny zavakanto, manome toerana ambony ny fiainana | Pincushion Design Next: Trano kambana haingo skandinavianina, endrika ankizy ho an'ny efitrano toy izany, tsara loatra!
Fitaovana fandroana mikraely voadio - safidy tsara ho anao
Mamorona drafitra haingo amin'ny fandroana amin'ny fandroana amin'ny fandroana amin'ny fandroana
Mitady fantson-drano sy torohevitra momba ny fantson-drano hampihenana ny fampiasana rano
Torohevitra hitandrina ny fandroana ny fandroana ny fandroana ny efitra fandroana ary tsy misy famotsorana
Ataovy mahay kokoa ny lakozia ao an-dakozia
Faucets ao an-dakozia - misafidy tsara